Raiso ny fitondrantena mety amin'ny toe-javatra tsy azo antoka
Araraoty ny paradoxes
Tohano amin'ny fomba mahomby ny fanovana
Ity MOOC ity dia kompà izay hitarika anao amin'ny fahatakarana ny fiovan'ny asa sy ny fitantanana ateraky ny areti-mifindra. Izany dia ahafahanao manana ny fananana rehetra mahomby amin'ny tontolon'ny post-Covid.
Izy io dia miresaka momba ny fitondran-tena tokony horaisina toe-javatra tsy azo antoka, ny fomba hanararaotra izay toa mifanohitra ary ny fomba hanohanana ny fanafainganana ny fanovana. Ho hitanao a topimaso momba ny fomba fitantanana tsara amin'ny alalan'ny fanoharana sy ny hevitra lalina.
Fitantanana post-Covid 18 Desambra 2021Tranquillus
HAMAKY Fahombiazana amin'ny fizahana finday
Teo alohaFAMPIANARANA: Fampiroboroboana ny fahasalamana amin'ny klioban'ny fanatanjahantena
manarakaFiainana sy fahazoana asa any Frantsa